Axmed Madoobe: Baarlamaanka Federaalka wuxuu ka shaqeynayaa in maamul kasta gooni isu taago – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com:- Hogaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa ku edeeyey baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iney ka shaqeynayaan falal keeni kara in maamul goboleed kasta kaligiis gooni isu taago oo uu xiriirka u jaro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Axned Madoobe oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa jeediyey hadalkaan iyadoo uu baarlamaanka Soomaaliya horyaallo mooshin maalmahan laga doodayey oo ka dhanka ahaa baarlamaanka maamulkiisa Jubaland.
Wuxuu Axmed Madoobe ku dooday in baarlamaanka federaalka ah uu shaqo ka dhigtay mooshin, islamarkaana uu ka leexday howshii laga rabay iney qabtaan inta ka horreysay sanadka 2016, oo la filayo iney dalka doorasho ka dhacdo.
“Waxa Xamar ka socdo ee Baarlamaanka uu wado waa fahmi la’yahay, shaqadii baarlamaanka waxay ku soo uruurtay mooshin, Mooshin ka qaad iyo mooshin u guur waxaa garan la’yahay Jubaland ma baarlamaanka Federaalka dhisay, ma isaga dhulka xoreeyay, ma iyaga shirka u qabtay, ma igaya sameeyay, waxay ka bixi la’yihiin iska daba wareeg, waxaan leehay baarlamaanka Federaalka keena mooshinka aad waddaan waxba kama qaadi kareysaan Jubaland”ayuu yiri Axmed Madoobe oo caro ka muuqatay.
“Arrinta ay wadaan baarlamaanka federaalku waxey keeni kartaa in maamul goboleed kasta u istaago gooni, oo la yiraahdo Xamar wanaag inoogama yimaaddo” ayuu sidoo kale yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa dhanka kale carradiisa kala dul-dhacay Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
“Guddoomiyaha Baarlamaanka ma qoys ayuu matala, mise waa Guddoomiyihii Baarlamaanka Soomaaliyeed, hadduu qoys matalo yuusan lugoyn dadka Soomaaliyeed, hadii kale sharciga iyo dastuurka ha ilaaliyo” ayuu Axmed Madoobe yiri.
“Madaxweynaha waxaa Oday Soomaaliyeed, aad buu u dadaalayaa, isaga yimid oo xaflada xiray, waa ninka sharciga ilaalinayay, markaan haddaan warkiisa la aqbaleyn waxaa leehay waa inuu ka maqnaadaa, waxaa loo baahanyahay go’aan adag” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Baarlamaanka Soomaaliya, oo shalay ka doodi lahaa mooshin ka dhan ah baarlamaanka Juba ayaa la baajiyey kadib markii xukuumadda uu hogaamiyo R/wasaare Cumar C/rashiid oo soo qortay warqad lagu codsanayo iney mooshinkaas dib loo dhigo.
Qaar ka mid ah beelaha dega Jubbooyinka ayaa ku doodaya in xubnaha ugu jira baarlamaanka Juba yihiin dad ay soo xuleen guddi uu dhisay, islamarkaana saaxiibo la ah Axmed Madoobe.
Itoobiya oo loo dareeray doorashada baarlamaannada